Ukwakhiwa kwe-Berlition 600 > Ukwelashwa nokuvimbela
Imiyalo engama-Berlition engu-600 yokusetshenziswa kokubuyekezwa kwezibuyekezo
I-Berlition 600: imiyalo yokusetshenziswa nokubuyekezwa
Igama lesiLatin: Berlithion 600
Ikhodi ye-ATX: A16AX01
Isithako esisebenzayo: I-Thioctic acid (Thioctic acid)
Umkhiqizi: Jenahexal Pharma, EVER Pharma Jena GmbH, Haupt Pharma Wolfratshausen (Germany)
Ukuvuselela incazelo nesithombe: 10/22/2018
I-Berlition 600 ilungiselelo le-metabolic ye-antioxidant ne-neurotrophic isenzo elawula imetabolism.
Uhlobo lomthamo we-Berlition 600 luyisigcino sokulungiswa kwekhambi lokufakwa kwe-infusion: uketshezi olucacile, ophuzi ophuzi ngo-24 ml ku-ampoules yengilazi emnyama (25 ml) onomugqa wekhefu (ilebula elimhlophe) nemivimbo eluhlaza okotshani nokuhlaza, ngakunye Ama-5 ama-PC. kwipulasitiki epulasitiki, ku-boardboard yenqwaba eyi-1 pallet.
I-1 ampoule iqukethe:
into esebenzayo: i-thioctic acid - 0,6 g,
izingxenye ezisizayo: i-ethylenediamine, amanzi wokujova.
Isithako esisebenzayo ku-Berlition 600 - α-lipoic (thioctic) acid, siyi-coenzyme ye-decarboxylation yama-α-keto acid kanye ne-endoxia antioxidant ye-Direct (binding free radicals) kanye nendlela yokusebenza engaqondile. Inomthelela ekwandeni kokuqukethwe kwe-glycogen esibindini, ukwehla kwezinga lokuxineka koshukela ekuplasma kwegazi nokumelana ne-insulin. Iba yingxenye yokulawulwa kwe-metabolism yama-carbohydrate nama-lipids, ivuselela ukushintshaniswa kwe-cholesterol.
Izici ze-antioxidant ze-thioctic acid zingavikela amaseli emonakalweni ngemikhiqizo yokubola, inciphise (kwisifo sikashukela) ukwakheka kwemikhiqizo yokuphela kwe-glycosylation ethuthukayo yamaprotheni kumaseli ezinzwa, ithuthukise ukuhamba kwegazi kwe-endoneural kanye ne-microcirculation, futhi kwandise okuqukethwe ngokomzimba kwe-glutathione antioxidant. Ukwenza kube nokwehla kwezinga le-glucose kwiplasma yegazi, ku-mellitus yesifo sikashukela kuthinta enye i-metabolism ye-glucose, kunciphisa ukuqoqwa kwe-pathological metabolites (polyols), ngaleyo ndlela kunciphisa ukuvuvukala kwezicubu zezinzwa.
Ukubamba iqhaza kwe-thioctic acid ku-metabolism yamafutha kuvumela i-biosynthesis ye-phospholipids (kufaka phakathi i-phosphoinositides) ukukhulisa, ukwenza ngcono ukwakheka okuphazamisekile kwezitho zamangqamuzana. Ibuyisa i-metabolism yamandla futhi ibuye iguqule ukwenziwa kwezinzwa zesibindi. Ibuyisela amandla imiphumela enobuthi yama-metabolites otshwala, anjenge-acetaldehyde ne-pyruvic acid, futhi inciphisa ukwakheka ngokweqile kwama-molecule we-oksijini obukhulu. Ngokwenza buthaka ukubonakaliswa kwe-polyneuropathy (i-paresthesia, umuzwa ovuthayo, ukuzindla kanye nobuhlungu bezinyawo), kunciphisa i-endoneural hypoxia ne-ischemia.
Ukusetshenziswa kwe-thioctic acid ngenhloso yokwelashwa ngendlela kasawoti we-ethylenediamine kunciphisa ubulukhuni bemiphumela emibi engaba khona.
Iqoqo eliphakeme kakhulu le-thioctic acid ku-plasma yegazi imizuzu engama-30 ngemuva kokuphathwa kwe-intravenous (iv) lifinyelela ku-0,02 mg / ml, inani lokuhlushwa libalelwa ku-0.005 mg / h / ml.
I-Berlition 600 ingaphansi kokuqothulwa kwesonto futhi ibhekelelwa ikakhulukazi umphumela wendima yokuqala ngesibindi. Ukwakheka kwama-metabolites kwenzeka ngenxa ye-side chain oxidation kanye ne-conjugation. I-Vd (ivolumu yokusatshalaliswa) - cishe i-450 ml / kg. Ukucaciswa kwe-plasma ephelele kungu-10-15 ml / min / kg. Ngokwezinga elikhulu, i-80-90% yezidakamizwa ikhishwa ngokusebenzisa izinso ngendlela yama-metabolites. Isigamu sempilo cishe siyimizuzu engama-25.
Imiyalo yokusebenzisa i-Berlition 600: indlela nomthamo
Isixazululo esiphelile somuthi senzelwe ukumiliselwa.
Ngokushesha ngaphambi kokusetshenziswa, i-1 ampoule ye-concentrate iyancibilika ku-250 ml wesisombululo se-sodium chloride engu-0.9%.Isixazululo kufanele siphathwe ngaphakathi / kokudonsa, isikhathi sokufakwa kumele okungenani sibe amahora angama-0.5. Njengoba into esebenzayo inezithombe, ibhodlela elinesixazululo esilungiselelwe kufanele ligoqwe nge-aluminium foil ukuze livikeleke ekuchayweni kokukhanya.
Udokotela unquma isikhathi sesifundo noma isidingo sokuphindwaphindwa kwakhe ngokwahlukana.
kusuka kumasosha omzimba: akuvamile kakhulu - ukusabela okwenziwa yi-allergic (ukulunywa, ukuqunjelwa kwesikhumba, i-urticaria), ezimeni ezingavamile - ukushaqeka kwe-anaphylactic,
kusuka ohlelweni lwezinzwa: kuyaqabukela kakhulu - idiplopiki, ukwephula noma ushintsho ekunambithekeni, ukukhishwa,
ohlangothini lwe-metabolism: kuyaqabukela kakhulu - ukwehla kwe-glucose ye-plasma, kungenzeka isiyezi, ikhanda, ukujuluka, ukhubazeka okubukwayo (izimpawu zesimo se-hypoglycemic),
kusuka ohlelweni lwe-hemopoietic: akuvamile kakhulu - i-purpura (i-hemorrhagic rash), i-thrombocytopathy, i-thrombophlebitis,
ukusabela kwendawo: kuyaqabukela - kuvutha indawo yomjovo,
okunye ukusabela: ngokubhekene nesizinda sesilinganiso somjovo we-intravenous high, ukukhuphuka kwesikhashana kwengcindezi ye-intracranial, ubunzima bokuphefumula.
Izimpawu zokweqisa kwe-thioctic acid yilezi: ikhanda, isicanucanu, ukugabha. Ezimweni ezimbi kakhulu zokuphuza, kufaka phakathi ukuphathwa ngengozi okungaphezulu kuka-80 mg wesidakamizwa nge-1 kg yesisindo somzimba, ukubukeka kokuhlaselwa okubanzi, ukuphazamiseka kwengqondo, ukuqonda okufiphalisiwe kuyimpawu. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukiswa kokuphazamiseka okukhulunywayo kwe-acid-base ibhalansi, i-hypoglycemia (kuze kufike ekukhuleni komzimba), i-lactic acidosis, i-necrosis eshubile yemisipha yamathambo, i-hemolysis, i-syndrome ye-desensitised intravascular coagulation, ukwehluleka kwezitho eziningi, ukucindezelwa komsebenzi wethambo.
Ukwelashwa: ngenxa yokuntuleka komuthi othile, kutholakala ukwelashwa okuphuthumayo esimweni sesibhedlela. Ukusebenzisa izindlela ezifanele zokuqeda izimpawu zobuthi, okufaka nezindlela zokunakekela zesimanjemanje zokwelapha amacala asongela impilo.
Ukusetshenziswa kwe-hemodialysis, hemoperfusion noma izindlela zokuhlunga ngokususwa okuyimpoqo kwe-thioctic acid akunampumelelo.
Iziguli ezinesifo sikashukela zidinga ukuqinisekisa ukubhekwa njalo kwezinga lokuxineka kwe-glucose ku-plasma yegazi, ikakhulukazi ekuqaleni kokusetshenziswa kwomuthi. Uma kunesidingo, nciphisa umthamo wommeli we-hypoglycemic womlomo noma i-insulin ukuvikela ukukhula kwe-hypoglycemia.
Njengoba i-ethanol inciphisa umphumela wemitholampilo we-Berlition 600, kwenqatshelwe ukuphuza utshwala futhi uthathe imikhiqizo equkethe i-ethanol ngesikhathi sokwelashwa naphakathi kwezifundo.
Ngokuphikisana nesizinda sokuphathwa umuthi okuphathelene nomuthi, ukusabela kwe-hypersensitivity kungaqhamuka, esimweni lapho isiguli silunywa, i-malaise kanye nezinye izinkomba zokungabekezelelani kwezidakamizwa, ukuqedwa kokungenelela ngokushesha kuyadingeka.
Ukugxila kwe-Berlition 600 kungachithwa kuphela kusixazululo se-0.9% sodium chloride. Ukugcinwa kwekhambi elilungiselelwe kuvunyelwe cishe amahora ayi-6, inqobo nje uma kuvikelwe ukukhanya.
Ukuqapha kuyalulekwa lapho wenza imisebenzi engaba yingozi nokushayela. Umphumela we-Berlition 600 ekugxilweni kokunaka kanye nezinga lokuphendula kwengqondo kwesiguli alifundwanga, kepha ukusabela okungekuhle okufana nesiyezi noma ukungaboni kahle kungathinta lezi zinkomba.
Ngokusebenzisa kanye kanye i-Berlition 600:
i-insulin, ama-ejenti omlomo we-hypoglycemic wokuphathwa komlomo: ukuthuthukisa umphumela wabo wezempilo,
I-ethanol: kunciphisa kakhulu umphumela wokwelapha we-thioctic acid,
Ukulungiswa kwensimbi: faka isandla ekwakhekeni kwezakhiwo zeshizi, ngakho-ke, kunconyelwa ukugwema inhlanganisela enjalo,
cisplatin: i-thioctic acid inciphisa ukusebenza kwayo.
Njenge-coenzyme ye-mitochondrial multenzyme complexes, ibamba iqhaza ku-oxidative decarboxylation ye-pyruvic acid kanye ne-alpha-keto acid. Isiza ukunciphisa ushukela wegazi futhi ikhuphule i-glycogen esibindini, futhi inqobele ukumelana ne-insulin.
Ngokwemvelo yesenzo se-biochemical, isondele kumavithamini we-B. Ibandakanya ukulawulwa kwe-lipid ne-carbohydrate metabolism, ivuselela i-cholesterol metabolism, futhi ithuthukise ukusebenza kwesibindi. Ukusetshenziswa kukasawoti we-trometamol we-thioctic acid (ukusabela kokungathathi hlangothi) kuzixazululo zokuphathwa kwe-intravenous kunganciphisa ubunzima bokusabela okuphambene.
umlando we-hypersensitivity kuzakhi ze-Berlition 600.
Ngokushesha ngaphambi kokusetshenziswa, i-1 ampoule ye-concentrate iyancibilika ku-250 ml wesisombululo se-sodium chloride engu-0.9%. Isixazululo kufanele siphathwe ngaphakathi / kokudonsa, isikhathi sokufakwa kumele okungenani sibe amahora angama-0.5. Njengoba into esebenzayo inezithombe, ibhodlela elinesixazululo esilungiselelwe kufanele ligoqwe nge-aluminium foil ukuze livikeleke ekuchayweni kokukhanya.
Ukusetshenziswa kwomuthi kuyaphikiswa ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa, ngenxa yokuntuleka kwesipiliyoni esanele somtholampilo ekwelashweni kwalesi sigaba seziguli.
Ngokusho kwemiyalo, i-Berlition 600 ayinakunqunyelwa ekwelashweni kwezingane kanye nentsha engaphansi kweminyaka engu-18, ngoba ukuphepha ukusetshenziswa komuthi nokusebenza kwayo akukasungulwa.
ezingxenyeni ezingilazi ezinsundu ezi-12 ml, ebhokisini lekhadibhodi le-5, 10 noma engama-20 ampoules.
emaphepheni amaqabunga ama-pcs ayi-10., ebhokisini lekhadibhodi lamaphakeji ama-3, ayi-6 noma ayi-10.
Incazelo yefomu lomthamo
Isixazululo somjovo: uketshezi ocacile wombala ophuzi okhanyayo ngombala ophuzi.
nxazonke, izibhebhe ze-biconvex zombala ophuzi ophuzi, ezine-notch yokuhlukanisa uhlangothi olulodwa.
I-Thioctic acid - i-antioxidant ye-endo native (ibopha ama-radicals mahhala), yakheka emzimbeni ngesikhathi se-oxidative decarboxylation yama-alpha-keto acid.
Lapho uthathwa ngomlomo, usheshe futhi umunxwe ngokuphelele emgudwini wokugaya ukudla (ukumunzwa ngokufakwa okungaphansi kokudla). Isikhathi sokufika ku-C max yimizuzu engama-40-60. I-Bioavailability ingama-30%. Inomphumela "wokudlula kokuqala" ngesibindi. Ukwakheka kwama-metabolites kwenzeka ngenxa ye-side chain oxidation kanye ne-conjugation. Umthamo wokusatshalaliswa ucishe ube ngu-450 ml / kg. Izindlela eziphambili ze-metabolic yi-oxidation ne-conjugation. I-Thioctic acid nama-metabolites ayo adalulwa izinso (80-90%). T 1/2 - imizuzu engama-20-50. Ingqikithi ye-plasma Cl - 10-15 ml / min.
Izinkomba zesidakamizwa i-Berlition 300
I-polyneuropathy yesifo sikashukela notshwala, i-steatohepatitis yama-etiologies ahlukahlukene, isibindi esinamafutha, ukudakwa okungamahlalakhona.
I-Hypersensitivity, ukukhulelwa, ukuncelisa ibele. Akufanele inikezwe izingane nentsha (ngenxa yokuntuleka kwesipiliyoni somtholampilo nokusebenzisa kwayo lesi sidakamizwa).
I-Iv . Ngezindlela ezinzima ze-IV polyneuropathy, 12-24 ml (300-600 mg ye-alpha lipoic acid) ngosuku amasonto ama-2-4. Kulokhu, ama-ampoules ama-1-2 womuthi axutshwe ku-250 ml wesisombululo se-sodium chloride yomzimba futhi aphathwe okwehla cishe imizuzu engama-30. Ngokuzayo, bashintshela ekwelashweni kwesondlo neBerlition 300 ngesimo samathebulethi ku-300 mg ngosuku.
Ukwelashwa kwe-polyneuropathy - 1 itafula. Izikhathi eziyi-1-2 ngosuku (300-600 mg we-alpha lipoic acid).
Ngesikhathi sokulashwa, umuntu kufanele wenqabe ukuphuza utshwala (utshwala nemikhiqizo yako yenze buthaka umphumela wezokwelapha).
Lapho uthatha umuthi, kufanele ubheke njalo ushukela wegazi (ikakhulukazi esigabeni sokuqala sokwelashwa). Kwezinye izimo, ukuvimbela izimpawu ze-hypoglycemia, kungahle kudingekile ukunciphisa umthamo we-insulin noma i-ejenti yomlomo ye-antidiabetes.
Ingxenye esebenzayo ekwakhiweni kwesidakamizwa i-Berlition yi-alpha-lipoic acid, eyaziwa nangokuthi yi-thioctic. Le nto itholakala ezithweni eziningi zomuntu, kepha izindawo eziyinhloko 'zokuhanjiswa' kwazo yinhliziyo, isibindi nezinso. I-Alpha-lipoic acid iyi-antioxidant enamandla, iyasiza ekwehliseni imiphumela yezakhi ezingezinhle. Iphinde ivikele isibindi futhi isize ukubuyisa ukusebenza kwayo.
I-Thioctic acid njengengxenye yesidakamizwa i-normalization ye-lipid metabolism, inikeza ukwehla ushukela wegazi, futhi kusize ukwehlisa isisindo. Umphumela wayo we-biochemical uyafana nalowo wamavithamini weqembu le-B. Isebenzisa izinqubo ze-cholesterol ze-metabolic, ivikela umzimba ekwakhekeni kweziqalo zegazi ze-atherosulinotic, iqinisekisa ukubola kwazo nokuhoxa ngokushesha.
Izakhi ezisebenzayo zomuthi zinciphisa inani lemikhiqizo eyenziwe ngezinqubo ze-enzymatic ezenzeka emzimbeni. Lokhu kukuvumela ukuthi uthuthukise umsebenzi we-neuro-peripheral, ukukhulisa izinga le-glutathione - i-antioxidant enamandla ekhiqizwa emzimbeni womuntu. Inikeza ukuvikelwa ezifweni zegciwane, izifo ezahlukahlukene kanye nezinto eziyingozi.
Ngaphansi kwethonya le-ejenti, ukubuyiselwa kanye nezinqubo zamandla kumaseli kuyasebenza futhi kusheshiswe. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukufaka i-Berlition yezidakamizwa esakhiweni sokwelashwa okuyinkimbinkimbi kwezifo eziningi.
Imboni yezemithi yenza i-Berlition ngamafomu amabili ehlukene. Lawa ngamathebulethi nokumiswa kwemijovo kuma-ampoules - i-Berlition 600. Kuthengiswa amaphilisi angama-Berlition angama-300 ngendlela yamapuleti ezincezu eziyi-10. Ziqukethe i-300 mg yento esebenzayo. Ngaphezu kwe-thioctinic acid, aqukethe amanani amancane e-colloidal silicon dioxide, i-magnesium stearate, i-povidone, i-croscarmellose sodium, i-lactose ne-microscopic cellulose.
Ngokuqondene nokugxila kokulungiswa kwekhambi, liqukethe i-25 mg / ml yento esebenzayo. Ngaphezu kwalokho, ukugxila kufaka phakathi izakhi ezisizayo: amanzi wokujova, i-ethylene diamine ne-propylene glycol.
Ama-analogies we-Berlition anento efanayo eyisisekelo ngomkhiqizo wokuqala - i-thioctic acid. Kodwa-ke, ama-analogues atholakala kuphela ngesimo samathebulethi namaphilisi. Akukho ukumiswa okuwuketshezi komjovo we-intravenous.
Ukuqokwa kanye nokuphikisana
Inkomba yokusetshenziswa kwomuthi i-atherosulinosis yemithambo ye-coronary, i-pathologies yesibindi yama-etiologies ahlukahlukene, ukudakwa, i-neuropathy uma kwenzeka uphuzo oludakayo noma isifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, i-Berlition 600 nefomu layo lethebhulethi likhonjiswa ngezinhlobo ezahlukahlukene ze-osteochondrosis.
Umuthi unezinto eziningi eziphikisana. I-Berlition 600 ayinqunyelwe i-hypersensitivity nokungabekezeleli kwento esebenzayo nezinye izinto zomuthi, kanye ne-galactosemia kanye nokungabekezelelani kwe-lactose. Ayibekelwe izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18.Ngaphezu kwalokho, kuyinto engathandeki ukuthatha i-Berlition iye komama nabahlengikazi ngesikhathi sokuzala ingane, ngenxa yokuthi abukho ubufakazi obubhalwe phansi bokuphepha kwalo muthi.
Umthamo nendlela yokuphatha kufanele inqunywe ngudokotela ohambelayo. Uhlobo lomthamo lincike kulesi sifo kanye nangesimo somuthi. Imvamisa, imijovo ibekelwa ukulwa nezimo ze-neuropathic, kwezinye izimo, kusetshenziswa amaphilisi. Izinguquko zingenziwa ohlotsheni lokwelashwa, kepha lokhu kufanele kunqunywe uchwepheshe.
Ithebhulethi kufanele ithathwe iphelele ngaphandle kokuhlafuna futhi ihlanzwe ngamanzi amaningi. Isikhathi esihle kakhulu ekuseni, isigamu sehora ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa ihambisana nesifo esitholakele, isimo sesiguli kanye nekhono lomzimba wakhe wokululama. Njengomthetho, sisuka emavikini ambalwa kuya enyangeni, kepha uma kunesidingo, singanwetshwa.
Ngemuva kokuphela kokwelashwa okuyinhloko, njenge-prophylaxis yokubonakaliswa okusha kanye nokwanda kwesifo, umuthi ungaqhubeka kumthamo oncishisiwe.
Ukusetshenziswa kwe-Berlition ukugxila kwe-600 kunqunywe ngokwesisekelo secala ngesimo. Imvamisa, lokhu kungukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa, kuvezwa izilonda zemithambo emincane yegazi, ukudakwa kakhulu noma isimo esingazi lutho lapho isiguli singakwazi ukuphuza umuthi uqobo.
Ngaphambi kokusetha i-dropper, i-ampoule yesidakamizwa ihlanganiswa ngosawoti. Ukulungiswa kwekhambi kufanele kwenziwe ngokushesha ngaphambi komjovo ukuze ungalahlekelwa yizimo zawo zokwelapha. Ukungafaneleki kokukhanya okukhazimulayo kusisombululo esivele isilungiselelwe. Ibhodlela elinalo kufanele ligoqwe ngephepha elisindayo lephepha, i-foil noma i-opaque polyethylene.
Uma kunesidingo sokwethula umuthi ngokuphuthumayo, kepha awukho u-saline, khona-ke ukwethulwa kokugxila kuvunyelwe. Kulokhu, isirinji kanye nephampu yokufaka isetshenziswa. Le yithuluzi elikhethekile elikuvumela ukuthi ulawule ukulethwa koketshezi esigulini. Izinga lokwethulwa kokugxila lingaphezulu kwe-1 ml / min. Ukudlula kuyo kwenqatshelwe ngokuphelele.
Kwezinye izimo, ukuphathwa kwe-intramuscular of the concentrate kuvunyelwe. Kepha lokhu kuya ngohlelo oluthile: kuyenqatshelwa ukufaka ijubane elingaphezu kwe-2 ml yesisombululo endaweni efanayo. Ngakho-ke, ngokwethula i-ampoule enevolumu engu-24 ml, kuzofanele wenze ama-punctures ayi-12 ezingxenyeni ezihlukene zemisipha.
Izifundo eziningi zemitholampilo zikhombisile ukuthi kwesinye isikhathi ukuthatha lo muthi kungadala imiphumela emibi ezithweni nasezinhlotsheni ezahlukene zomzimba. Ngaphezu kwalokho, ubudala noma ubulili babaguli abuthinti ukwenzeka kwabo. Ngokujwayelekile kaningi, zingavela kwabesilisa nabesifazane, kubantu abasha nakwabagulayo asebekhulile.
Umuthi ungavusa ukuqala kwenhliziyo, ukuhlanza, ukushisa kwenhliziyo. Uhlelo lwezinzwa lungaphendula emithini ngokuncipha kokunambitheka, ukuqaqamba, kanye nomuzwa wokufiphala emehlweni.
Izibhebhe ze-Berlition nekhambi lomjovo kuthinta izinqubo ze-metabolic. Ukwehla kwezinga le-glucose egazini kuyabonakala, futhi, ngenxa yalokho, isiyezi, ikhanda, ukujuluka kuyavela. Kwezinye izimo, i-urticaria, ukuqubuka kwesikhumba, ukulunywa, ukuvela komzimba kungaqhamuka.
Ubuhlungu obuvuthayo bungazwakala kumasayithi omjovo. Leli qiniso liqinisekiswa ukubuyekezwa kweziguli ezinikezwe imijovo ye-Berlition. Ngaphezu kwalokho, isixazululo esisheshayo kakhulu singavusa umuzwa wobunzima ekhanda kanye nokuphefumula.
Ukuphuza ngokweqile nokungafanele ngokweqile komthamo odingekayo kungadala ukweqisa komuthi kanye nokuvela kwezimpawu ezingemnandi: ukwehluleka, ukungazi lutho, ikhanda, isicanucanu nokuhlanza, ukwehla okukhulu kwesibalo se-glucose egazini, nokuphazamiseka kwengqondo. Ngaphezu kwalokho, i-acidity ingakhula ngokuqinile emzimbeni, umsebenzi wezitho ezithile nokusebenza kokuhlangana kwegazi kungaphazamiseka.
I-Berlition isho izidakamizwa ezithuthukisa ukusebenza kwe-metabolism nokusebenza kwamaseli wesibindi. Ithuluzi linciphisa ukugcwala kwe-cholesterol kumaseli egazi, lisetshenziselwa ukwelapha izifo zesibindi, i-atherosclerosis, isifo sikashukela nokuphuza ngokweqile.
Incazelo yesidakamizwa, ifomu lokukhipha nokwakhiwa kwalo
Ithuluzi linemiphumela eminingi:
kwehlisa ukugxilwa kwe-lipid,
ukusheshisa inqubo ye-cholesterol metabolism,
ithuthukisa ukusebenza kwesibindi,
kwehlisa ushukela wegazi.
I-Berlition iyisidakamizwa se-antioxidant. Kubonakala ngomphumela we-vasodilating.
Ithuluzi lisiza ukusheshisa inqubo yokuvuselelwa kwamaseli futhi lisheshisa izinqubo ze-metabolic kuzo. Umuthi usetshenziswa ngenkuthalo ekwelapheni i-osteochondrosis, i-polyneuropathy (isifo sikashukela, esinotshwala).
I-Berlition yenziwa ngezindlela eziningana:
I-300 mg amaphilisi
ngesimo sokugxilisela okusetshenziselwa umjovo (300 no-600 mg).
Isakhi esiyinhloko yi-thioctic acid. Njengento eyengeziwe, i-Ethylenediamine ikhona kanye namanzi okujova. Yethula ngokugxila kanye ne-propylene glycol.
Ukwakheka kwamacwecwe kufaka i-magnesium stearate ne-povidone. Kukhona i-cellulose ngesimo sama-microcrystals, i-silicon dioxide, kanye ne-lactose ne-croscarmellose sodium.
Imibono yeziguli kanye nezintengo zezidakamizwa
Ukusuka ekubuyekezweni kweziguli, singaphetha ngokuthi umuthi ubekezelelwe kahle. Imiphumela emibi ayivelakancane futhi incane.
Umuthi ubekelwe umuthi wokwelashwa kwe-osteochondrosis. Udokotela obekhona wachaza ukuthi lesi sidakamizwa sibuyisela ukuhamba kwegazi. Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva komjovo, uBerlition wazizwa esengcono kakhulu. Kuyaqapheleka ukuthi ngaphezu kwalokho ngaphathwa ngeChondroxide nePiracetam. Kunoma ikuphi, kwangisiza.
Umuthi omkhulu. Welashwa ngalo muthi futhi wathola impumuzo. Kwakunemizwa evutha njalo emilenzeni nomuzwa wobunzima kuyo.
Izinto zevidiyo ezimayelana nesifo sikashukela, ukuvimbela kwaso nokwelashwa:
Izindleko zomuthi ezifundeni ezahlukahlukene zinezincazelo ezihlukile futhi kuya ngohlobo lwazo:
I-300 mg amaphilisi - ama-ruble angama-683-855,
Ama-ampoule ayi-300 mg - ama-ruble ayi-510-725,
I-600 mg ampoule - ama-ruble ayi-810-976.
I-Berlition isidakamizwa esuselwa ku-alpha lipoic acid.
Amagama, amafomu wokukhishwa nokwakhiwa kwe-Berlition
Ukukhombisa umthamo womuthi, amagama asetshenziswe lula "Berlition 300" noma "Berlition 600" ajwayele ukusetshenziswa. Ukugxila kakhulu kokulungiswa kwekhambi kuvame ukubizwa ngokuthi "ama-Berlition" ampoules. Kwezinye izikhathi ungezwa ngama-capsule we-Berlition, noma kunjalo, namuhla alikho ifomu lomthamo, futhi umuntu unombono wokuhluka kwesidakamizwa ukuphathwa komlomo.
Njengesithako esisebenzayo, i-Berlition iqukethe i-alpha lipoic acid futhi obizwa thioctic . Njengezinto ezisizayo, ukugxila kokulungiswa kwekhambi kuqukethe i-propylene glycol namanzi okujova. Futhi amaphilisi we-Berlition njengezakhi ezisizayo aqukethe izinto ezilandelayo:
I-Silicon dioxide hydrate.
Izibhebhe ze-Berlition zitholakala emaphaketheni wezingcezu ezingama-30, ezingama-60 noma eziyi-100, ezingama-300 mg zokugxila - ama-ampoules ayi-5, 10 noma angama-20, kanye nama-600 mg agxilisiwe - ama-ampoules ayi-5 kuphela.
Ukugxila kusezintanjeni ezibonakala ngokusobala ezifihliwe. Ukugxilisisa uqobo kubonakala ngaphandle, kupendwe ngombala ophuzi ophuzi. Amathebulethi anomumo oyindilinga, obhalwe nge-biconvex futhi anemibala ephuzi. Kukhona ubungozi endaweni eyodwa yamathebhulethi. Iphutha, ithebhulethi inendawo engalingani, ebumbekile, ipendiwe ophuzi.
Imiphumela yokwelapha ye-Berlition
Ukufezeka kokwehla kokuxinwa koshukela egazini kwenzeka ngenxa yokwanda kokuzwela kwamangqamuzana ukuya ku-insulin kanye nokwehla kokumelana.Ngenxa yalokhu, ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, ukubekwa kweshukela egazini elingaphakathi lemithambo yegazi kuyancipha kanye nokuqina kwe-glycosylation kanye nomonakalo wama-radicals wamahhala wamangqamuzana ezinzwa ayancipha. Lokhu-ke kunciphisa i-hypoxia yama-nerve fibers namaseli, kuvikela kuma-radicals wamahhala, futhi kuthuthukise nokudla kwawo kanye nokusebenza kwawo. Ngenxa yalokhu, ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, i-neuropathy ehambisana ne-protein glycosylation egcwele iyavinjwa. Okusho ukuthi, i-Berlition ithuthukisa umsebenzi wezinzwa zepherishi, imisa izimpawu ze-polyneuropathy (ukushisa, izinhlungu, ukubekezela, njll.).
Imiyalo yokusebenzisa i-Berlition kuma-ampoules (i-Berlition 300 ne-600)
Ama-infusions we-Berlition asetshenziselwa ikakhulukazi ukwelapha ama-neuropathies. Ukwelapha ubuthi, izifo zamathumbu kanye nezifo zesibindi kwenziwa emacwecweni. Kodwa-ke, uma umuntu engakwazi ukuphuza amaphilisi, ulimala nge-Berlition ngomthamo umthamo ka-300 mg ngosuku (1 ampoule ka-12 ml).
Ukulungiselela isixazululo sokufakwa kwe-intravenous, i-ampoule eyodwa ye-Berlition 12 ml noma i-24 ml (300 mg noma i-600 mg) kufanele ihlanjululwe ku-250 ml we-saline yomzimba. Ukwelashwa kwe-neuropathy, isixazululo esiqukethe ama-300 mg noma ama-600 mg we-Berlition senziwa kanye ngosuku amasonto amabili kuya kwayi-4. Ngemuva kwalokho bashintsha ukuthatha i-Berlition kumathebulethi kumthamo wesondlo wama-300 mg ngosuku.
Isixazululo sokuphathwa kwe-intravenous kumele silungiselelwe ngokushesha ngaphambi kokusetshenziswa, ngoba siphulukana nezinto zalo ngokushesha. Isixazululo esiphelile kumele sivikeleke elangeni, sisonge isitsha nge-foil noma ngephepha le-opaque. Ukugxiliswa okuvinjelwe kungasetjenziswa isikhathi esingamahora ayi-6 uma isisombululo sigcinwe endaweni emnyama.
Uma kungenzeki ukulungiselela isixazululo sokungenela, khona-ke ukugxila okungahambanga kahle kungabanjiswa ngokuqondile usebenzisa isirinji ne-perfuser. Kulokhu, ukugxila kufanele kuphathwe kancane, hhayi ngokushesha kune-1 ml ngomzuzu. Lokhu kusho ukuthi i-ampoule eyi-12 ml kufanele iphathwe okungenani imizuzu eyi-12, no-24 ml - ngokulandelana, imizuzu engama-24.
I-Berlition ingalawulwa nge-intramuscularly ku-2 ml wokugxila ngomjovo ngamunye. Ngaphezu kwe-2 ml yokugxila akunakufakwa endaweni yemisipha efanayo. Lokhu kusho ukuthi ekwethulweni kwe-12 ml ye-concentrate (i-1 ampoule) kuzodingeka ukuthi kwenziwe imijovo emi-6 ezingxenyeni ezahlukahlukene zomsipha, njll.
Ngenxa yekhono lokusebenzisana namakhemikhali nge-ion yensimbi, akunconywa ukuthatha amalungiselelo e-magnesium, iron, noma i-calcium ngemuva kokuthatha i-Berlition, ngoba ukwehla kwabo kuzoncishiswa. Kulokhu, kunconywa ukuthatha i-Berlition ekuseni, namalungiselelo aqukethe izinhlanganisela zensimbi ntambama noma kusihlwa. Okufanayo kuya ngemikhiqizo yobisi ephezulu kakhulu ku-calcium.
I-Alcohol utshwala kanye ne-ethyl alcohol, equkethwe kuma-tinctures ahlukahlukene, yehlisa ukusebenza kwe-Berlition.
Ukugxiliswa kwe-Berlition akuhambelani nezixazululo ze-glucose, i-fructose, i-dextrose ne-Ringer, ngoba i-thioctic acid yakha ukuhlangana okungancibilikisi kahle ngamangqamuzana kashukela.
I-Berlition ithuthukisa umphumela wezidakamizwa ze-hypoglycemic ne-insulin, ngakho-ke, ngokusetshenziswa kanyekanye, kuyadingeka ukunciphisa umthamo wabo.
Berlition (300 no-600) - ama-analogues
I-Lipamide - amaphilisi
I-Lipoic acid - amaphilisi nesisombululo somjovo we-intramuscular,
I-Lipothioxone - ukugxila kokulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous,
I-Neyrolipon - amaphilisi bese ugxila ngokulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous,
I-Oktolipen - amaphilisi, amaphilisi nokugxila kokulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous,
I-Thiogma - amaphilisi, isixazululo kanye nokugxila kokufakwa,
I-Thioctacid 600 T - isixazululo sokuphathwa kwe-intravenous,
I-Thioctacid BV - amaphilisi,
I-Thioctic acid - amaphilisi,
I-Tiolepta - amaphilisi nesisombululo sokungeniswa,
I-Thiolipone - ukugxila kokulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous,
I-Espa-Lipon - amaphilisi futhi agxilise ukulungiswa kwesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous.
Izinhlu zezifiso Le mithi elandelayo yile:
Izingane ze-Bifiform - amaphilisi atholakalayo,
I-Gastricumel - amaphilisi we-homeopathic,
I-Curtain - amaphilisi
I-Orfadine - amaphilisi
Kuvan - amaphilisi.
I-Berlition (300 no-600) - izibuyekezo
Ukubuyekezwa okungalungile kwe-Berlition kuncane kakhulu futhi kubangelwa ikakhulukazi ukungabi bikho komphumela olindelekile kuwo. Ngamanye amagama, abantu babethembele kumphumela munye, futhi umphumela ubehlukile kancane. Kulesi simo, kunokudumala okukhulu kulo muthi, futhi abantu bashiya isibuyekezo esingesihle.
Ngaphezu kwalokho, odokotela abalandela ukugcinwa ngokuqinile kwemigomo yemithi esekelwe ebuhlotsheni bashiya izibuyekezo ezingezinhle nge-Berlition. Njengoba ukusebenza kwamtholampilo kwe-Berlition kungakaze kufakazelwe, bakholelwa ukuthi umuthi awunangqondo futhi awudingeki ngokuphelele ekwelashweni kwama-neuropathies ku-mellitus yesifo sikashukela kanye nezinye izimo noma izifo. Ngaphandle kokuthuthuka okuhle kwesimo somuntu, odokotela bacabanga ukuthi iBerlition ayinamsebenzi ngokuphelele futhi ishiya ukubuyekezwa okungalungile ngaye.
I-Berlition noma i-Thioctacid?
I-Thioctacid yokuphatha ukungena ngaphakathi iyathengiswa ngaphansi kwegama lokuhweba iThioctacid 600 T, futhi iqukethe i-100 mg noma i-600 mg yento esebenzayo nge-ampoule ngayinye. Futhi i-Berlition yokujova iyatholakala kumthamo we-300 mg no-600 mg. Ngakho-ke, uma kunesidingo, ukusetshenziswa kwe-lipoic acid kumithamo ephansi kungcono ku-thioctacid. Uma udinga ukufaka i-600 mg ye-lipoic acid, khona-ke ungakhetha noma yiliphi ithuluzi eluselwa kokuthandayo. Zombili i-Berlition ne-Thioctacid nazo ziyatholakala kwifomu lethebhulethi, ngakho-ke uma udinga ukusebenzisa imali ukuphatha ngomlomo, ungakhetha noma yisiphi isidakamizwa.
Isibonelo, amaphilisi we-Thioctacid atholakala kumthamo we-600 mg, kanye ne-Berlition - 300 mg, ngakho-ke owokuqala kumele uthathwe munye ngosuku, kuthi owesibili, ngokulandelana, amabili. Ngokombono wokubukeka okulula, iThioctacid iyathandeka, kepha uma umuntu engenamahloni ngesidingo sokuthatha amaphilisi amabili nsuku zonke ngasikhathi sinye, ke iBerlition imphelele.
Ngaphezu kwalokho, kukhona ukubekezelela ngakunye kwezidakamizwa, kuya ngezici zomzimba womuntu ngamunye. Lokhu kusho ukuthi umuntu oyedwa ubekezelela i-Berlition kangcono, kanti omunye - iThioctacid. Esimweni esinjalo, kuyadingeka ukukhetha umuthi obekezelelwa kangcono futhi ongabangeli imiphumela emibi. Kepha lokhu kungenqunywa kuphela ngokuzama ukuthatha izidakamizwa ezahlukahlukene.
Kodwa-ke, uma izimpawu zomtholampilo zimbi kakhulu noma amaphilisi engasizi, kunconyelwa ukuphatha izidakamizwa eziqukethe i-alpha-lipoic acid ngaphakathi. Esimweni esinjalo, kuyadingeka ukusebenzisa i-Berlition ngendlela yokugxila lapho kulungiswa isisombululo sokuphathwa kwe-intravenous, noma i-Thioctacid 600 T.
I-Berlition (amaphilisi, ama-ampoules, ama-300 nama-600) - intengo
Njengamanje, emakhemisi emadolobheni aseRussia, izindleko zeBerlition zimi ngalendlela elandelayo:
Izibhebhe ze-Berlition 300 mg 30 izingcezu - 720 - 850 ruble,
I-Berlition gxilisa ama-300 mg (12 ml) ama-ampoules angama-5 - 510 - ama-ruble angama-721,
I-Berlition gxila ku-600 mg (24 ml) ama-ampoules ama-5 - 824 - 956 rubles.
Umphumela omubi Berlition
Ukwephulwa kwe-glucose metabolism (hypoglycemia), imiphumela yokungezwani komzimba (kufaka phakathi ukushaqeka kwe-anaphylactic), ngokushesha / / ukubambezeleka kwesikhashana noma ubunzima bokuphefumula, ukukhuphuka kwengcindezi ye-intracranial, ukwethuka, i-diplopia, ukukhishwa kwengqondo esikhunjeni kanye nama-membrane we-mucous, dysfunctions.
Imiyalo yokusebenzisa umuthi i-Berlition
Ngaphezu kwalokho, amaphilisi we-Berlition angathathwa njengengxenye yokwelapha okuyinkimbinkimbi kwezifo zesibindi, ubuthi kanye ne-atherosclerosis, eyodwa ngasikhathi.Isikhathi sokwamukelwa sinqunywa izinga lokululama.
I-Berlition - imithetho yokubamba i-dropper
Njenge-solvent yokugxila, kungasetyenziswa kuphela usawoti oyinyumba.
Iziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, ekuqaleni kokwelashwa nge-Berlition, kufanele ziqaphele ukugcwala kwe-glucose egazini izikhathi ezi-1-3 ngosuku. Uma ukugcwala kwe-glucose ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-Berlition kunciphe kumkhawulo ophansi wesimo esijwayelekile, kubalulekile ukunciphisa umthamo we-insulin noma ama-hypoglycemic agents.
Ngokuphathwa kwe-Berlition kwe-intravenous, ukusabela komzimba kungavela ngendlela yokulunywa noma komala. Kulokhu, kufanele umise ngokushesha ukwethulwa kwekhambi.
Uma isixazululo sikhishwa ngokushesha okukhulu, ungahle uzizwe unosizi ekhanda, ukugoba kanye nombono ophindwe kabili. Lezi zimpawu ziyanyamalala zodwa futhi azidingi ukuqedwa komuthi.
Kuyo yonke inkathi yesicelo sikaBerlition, ukunakekelwa kufanele kuthathwe lapho ushayela imoto nomsebenzi odinga ukunakwa okukhulu.
Lapho uthatha noma ulawula ukungena kwe-5000 mg ye-Berlition, kunganda i-overdose enezimpawu ezinzima, njengokuthi:
Ukwehla okukhulu kwe-glucose egazini kuze kufike ku-hypoglycemic coma,
Ukwehluleka kwezitho nezistimu eziningana.
Uma kwenzeka kusetshenziswe ngokweqile i-overdose, i-Berlition idinga ukuphuthumisa esibhedlela umuntu ogcinwe esibhedlela lapho kunakekelwa khona izibhedlela, ukuphathwa kwezidakamizwa kanye nokwelashwa okusobala ukuqeda izimpawu ezibuhlungu. I-Berlition ayinayo i-antidote ethize, kanye ne-hemodialysis, ukuhlunga kanye ne-hemoperfusion akusheshisi ukuphuma kwe-Berlition.
Ukusetshenziswa kwe-Berlition ngesikhathi sokukhulelwa nokukhulelwa
Ngenxa yekhono lokusebenzisana namakhemikhali nge-ion yensimbi, akunconywa ukuthatha amalungiselelo e-magnesium, iron, noma i-calcium ngemuva kokuthatha i-Berlition, ngoba ukwehla kwabo kuzoncishiswa.Kulokhu, kunconywa ukuthatha i-Berlition ekuseni, namalungiselelo aqukethe izinhlanganisela zensimbi ntambama noma kusihlwa. Okufanayo kuya ngemikhiqizo yobisi ephezulu kakhulu ku-calcium.
Imiphumela emibi ye-Berlition
I-Berlition ingadala imiphumela elandelayo elandelayo yezitho nezinhlelo ezahlukahlukene:
1.Kusuka ohlelweni lwezinzwa:
Ushintsho noma ukwephula ukunambitheka,
I-diplopia (umuzwa wokubuka okuphindwe kabili).
2.Kusuka kumgudu wokugaya (kuphela amathebulethi):
3.Kusuka ohlelweni lwegazi:
Ukuvela kwezinhlobo zama-pathological zama-platelet (i-thrombocytopathy),
Imvamisa yokopha ngenxa yokuguqulwa kweplatelet,
Ama-Spot hemorrhages esikhunjeni noma ulwelwesi lwama-mucous (isilwane esisodwa),
Yehla ekuhlangeni kashukela egazini,
Izikhalazo ezihambisana neglucose legazi eliphansi (isiyezi, ukujuluka, ikhanda).
5.Kuwo amasosha omzimba:
Ukushaqeka kwe-Anaphylactic (amacala angawodwa kubantu athambekele ekuthambekeni komzimba).
6.Ukuphendula kwendawo okwenzeka endaweni yomjovo:
Umuzwa ovuthayo endaweni yokuphatha isixazululo se-Berlition,
Izinhlungu ezivuthayo esizeni somjovo,
Umuzwa wesisindo ekhanda ovela ekuphathweni okusheshayo kwe-solution ngenxa yokwanda kwengcindezi ye-intracranial,
I-Berlin-Chemie AG / Menarini Group, ekhiqizwe ngu-Iyegeksal Pharma GmbH (Germany), Iyegeksal Pharma GmbH (Germany), Ever Pharma Iye GmbH / Berlin-Chemie AG (Germany)
I-Hepatoprotective, i-detoxization, i-hypocholesterolemic, i-lipid-yehlisa, i-antioxidant.
Kuyi-coenzyme ye-oxidative decarboxylation ye-pyruvic acid ne-alpha-keto acid, ijwayelekile amandla, i-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism, futhi ilawula i-cholesterol metabolism.
Kuthuthukisa ukusebenza kwesibindi, kunciphisa imiphumela elimazayo yobuthi bendabuko nabangaphandle kuyo.
Ngemuva kokuphathwa ngomlomo, kushesha futhi kugxile ngokuphelele, ukugxilisa okukhulu kufinyelelwa ngemuva kwemizuzu engama-50.
I-Bioavailability icishe ibe ngama-30%.
Ikhulisa futhi iqinise esibindini.
Kukhishwe izinso ngesimo sama-metabolites (80-90%).
Isigamu sempilo yimizuzu engama-20-50.
I-Coronary atherosclerosis (ukuvimbela nokwelashwa), izifo zesibindi (isifo seBotkin esinobunzima obukhulu, i-cirrhosis), i-polyneuropathy (isifo sikashukela, i-alcoholic), ubuthi obuningi bensimbi nokunye ukudakwa.
Izimpawu zamaqembu we-nosological
Izivumelwano zezifo ngokwe-ICD-10
G62.1 I-Alcoholic polyneuropathy I-Alcoholic polyneuritis
I-G63.2 Diabetesic polyneuropathy (E10-E14 + enenombolo yesine ejwayelekile. 4) Isifo sezinhlungu ku-neuropathy yesifo sikashukela
Ubuhlungu ku-polyneuropathy yesifo sikashukela
Isifo sikashukela se-polyneuropathy
I-neuropathy yesifo sikashukela
I-Diabetesic neuropathic ulcer ephansi yesilonda somlenze
I-Peripheral Diabetesic Polyneuropathy
I-Sensory-motor diabetesic polyneuropathy
K71 Ukulimala kwesibindi esinobuthi Umphumela wezidakamizwa esibindini
Umphumela ubuthi esibindini
Imiphumela ye-Hepatotoxic yezidakamizwa
Ukulimala kwezidakamizwa esibindini
Umsebenzi wesibindi okhubazekile we-etiology enobuthi
Ukulimala kwesibindi esinobuthi
K76.0 Ukwehla kwamafutha kwesibindi, hhayi kwenye indawo Amafutha hepatosis
Amafutha wesibindi i-dystrophy
Ukonakala kwesibindi esinamafutha
Ukuphazamiseka kwe-lipid metabolism yesibindi
I-atrophy ephuzi kakhulu yesibindi
I-Berlition 600 - ithuluzi elithinta uhlelo lokugaya nezinqubo ze-metabolic.
I-Thioctic acid yinto etholakala emsobeni efana namavithamini, esebenza njenge-coenzyme futhi ibamba iqhaza ku-oxidative decarboxylation ye-a-keto acid. Ngenxa ye-hyperglycemia eyenzeka kwisifo sikashukela, i-glucose inamathele kumaprotheni e-matrix emithambo yegazi nasekwakheni lokho okubizwa ngokuthi “yimikhiqizo yokugcina ye-glycolysis esheshayo”. Le nqubo iholela ekunciphiseni kokugeleza kwegazi okungapheli kwe-endoneural hypoxia / ischemia, nayo, eholela ekwakhiweni okwandayo kwama-radicals aqukethe i-oksijini omonakalo wezinzwa zangaphakathi. Ukwehla kwezinga lama-antioxidants, njenge-glutathione, emithanjeni yangaphandle nakho kuye kwabonwa.
Umthamo wansuku zonke yi-300-600 mg (ama-ampoules angu-1-2). Ama-ampoules ama-1-2 womuthi (i-12-24 ml yesisombululo) axutshwa ku-250 ml wesisombululo se-sodium chloride yesilonda bese ejova ngaphakathi cishe imizuzu engama-30.
Ekuqaleni kwenkambo yokwelashwa, lo muthi uphathwa i-iv amasonto angama-2-4.
Ngemuva kwalokho, ungaqhubeka nokuthatha i-thioctic acid ngaphakathi ngethamo lika-300-600 mg / ngosuku.
Ukusetshenziswa kwe-Berlition yezidakamizwa
Isifo sikashukela nesinotshwala.
Isidakamizwa i-Berlition 300 captures, i-Berlition 300 ngomlomo - ngesimo samathebhulethi ahlanganisiwe, thatha amaphilisi ama-2 ngaphakathi ngaphakathi ngosuku, ama-Berlition angama-600 amakhompiyutha - 1 isicwecwe 1 isikhathi ngosuku imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla kokuqala.
Ezimweni ezimbi kakhulu zalesi sifo, ukuphathwa kuhlanganiswe ngomuthi (iv kanye nomlomo) kusetshenziswa emavikini okuqala e-1 okwelashwa: ekuseni iv injing engu-24 ml / ngosuku I-Berlition 600 U in ngesimo sokugxila lapho kulungiswa khona isisombululo sokungenelela noma u-12-24 ml wesisombululo izidakamizwa Berlition 300 IU ngesimo sokugxila lapho kulungiswa khona isisombululo sokungenelela futhi kusihlwa - thatha lesi sidakamizwa ngesimo samaphilisi noma amaphilisi Berlition 300 noma 600 mg.
Ukwehliswa kwesidakamizwa i-Berlition 300 noma i-600 IU sisebenzisa isisombululo se-0.9% sodium chloride kuphela. Okuqukethwe kwe-ampoule kuhlanjululwe ngo-250 ml walesi sixazululo futhi kufakwe ngaphakathi imizuzu okungenani engama-30. Isixazululo somuthi kumele sivikeleke ekuchayweni kokukhanya kwelanga (ngokwesibonelo, ukugoqa ibhodlela nge-foil aluminium). Uma lesi simo sihlangabezana, ikhambi elihlanjululwe lingagcinwa amahora angama-6. Ukwelashwa okuqhubekayo, ama-300-600 mg e-α-lipoic acid asetshenziswa ngendlela yamaphilisi noma amaphilisi we-Berlition 300 noma 600 mg. Inkambo yokwelashwa okungenani izinyanga ezi-2, uma kunesidingo, ingaqhutshwa izikhathi ezi-2 ngonyaka.
V / m faka Amayunithi angama-300 we-Berlition kungenzeka ngomjovo ku-umthamo ongadluli ku-2 ml, indawo yomjovo we-intramuscular kufanele iguqulwe njalo. Inkambo yokwelashwa ingamaviki angama-2-4. Njengokwelashwa okusekayo, ukuphathwa ngomlomo kukhonjisiwe. I-Berlition 300 ngomlomo I-amaphilisi angu-1-2 ngosuku izinyanga ezimbili.
Isifo sesibindi. Umuthi unqunywe ngokuya ngohlelo olungenhla ngenhla ka-600-1200 mg we-α-lipoic acid ngosuku, kuya ngobukhulu besimo namapharamitha welebhu wesimo sokusebenza kwesibindi sesiguli.
Ukusebenzelana Kwezidakamizwa Berlition
I-α-lipoic acid yakha izinto eziyinkimbinkimbi nezinsimbi (ngokwesibonelo, nge-chisplatin), ngakho-ke, ukusetshenziswa kwayo kanyekanye ne-cisplatin, insimbi, i-magnesium nemikhiqizo yobisi, ngenxa yokuqukethwe kwe-calcium kuyo, akunconyiwe. ICisplatin akufanele ichazwe ngasikhathi sinye nokusetshenziswa kweBerlition ngenxa yokwehla kwesenzo sayo ngaphansi kwethonya le-α-lipoic acid.
I-α-Lipoic acid iyakwazi ukwakha izingxube eziyinkimbinkimbi kabi ezinoshukela eziqukethwe kwezinye izixazululo zokufakwa, ngakho-ke umuthi awuhambisani ne-fructose, ushukela, njll, kanye nezidakamizwa ezaziwa ukungena ekuphendukeni kwamaqembu e-SH-noma amabhuloho angasebenzi.
I-Pharmacodynamics Isithako esiyisisekelo esisebenzayo somuthi yi-antioxidant yemvelo ehlanganisa ama-free radicals. I-Acid ikhiqizwa ngumzimba ngenxa yemiphumela ye-oxidative kuma-α-keto acid.
Nakani! Ukubuyekezwa kodokotela kukhombisa ukuthi umuthi unomphumela omuhle ekunciphiseni ushukela wegazi, ukwandisa amazinga we-glycogen wesibindi nokunqoba ukumelana ne-insulin.
Ngokwezakhi zabo ze-biochemical, ama-Berlition 300 no-600 amaphilisi asondele kumavithamini we-B.
Bamba iqhaza ekujwayekeni kwe-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism.
Thuthukisa ukusebenza kwesibindi, uvuselele i-cholesterol metabolism.
Zine-hypoglycemic, hepatoprotective, hypocholesterolemic, hypolipidemic effect.
Ukusetshenziswa kwe-Berlition 300 ne-600 kwimidwebo yomjovo we-intravenous kunganciphisa ubunzima bokuphendula okungahambi kahle.
I-Pharmacokinetics Ama-Berlition 300 kanye namathebhulethi angama-600, noma, izinto zawo asebenzayo, anekhono 'lokudlula' kuqala esibindini. I-Thioctic acid nezakhi zayo cishe ngokuphelele (80-90%) kudalulwe izinso.
Isixazululo somjovo Berlition. Isikhathi sokufinyelela ekuhlushweni okuphezulu emzimbeni ngokuphathwa kwe-intravenous yimizuzu eyi-10-11. Indawo engaphansi kwekhola yezemithi (okuhlushwa isikhathi) ngu-5 μg h / ml. Ukuhlushwa okuphezulu yi-25-38 mcg / ml.
Amathebhulethi we-Berlition wokuphathwa komlomo ngokushesha ancibilika futhi amunwa ngokuphelele emgodini wokugaya ukudla. Uma kuthathwa ngokudla, i-adsorption iyancipha. Ukuhlushwa okuphezulu kwesidakamizwa kutholakala ngemuva kwemizuzu engama-40-60. I-Bioavailability ingama-30%.
Isigamu sempilo yimizuzu engama-20-50. Ukucaciswa kwe-plasma ephelele kungu-10-15 ml / min.
Ezinye izici zesidakamizwa
Ukubuyekezwa kodokotela neziguli nge-Berlition kuyinto enhle kakhulu, kepha, njenganoma yisiphi esinye isidakamizwa, inezimpawu zayo. Ngesikhathi sekhambi lokwelapha, iziguli kufanele zenqabe ukuphuza utshwala.
Isifo sikashukela sidinga ukubhekwa njalo kwamazinga kashukela we-plasma. Lokhu kubaluleke kakhulu ekuqaleni kokwelashwa. Kwesinye isikhathi kungadingeka ukuthi kuncishiswe umthamo wezidakamizwa ze-insulin noma ze-hypoglycemic ezithathwe iziguli ngaphakathi. Ngakho-ke, ubungozi be-hypoglycemia bunqatshiwe.
Isisombululo somjovo we-Berlition 300 noma 600 kufanele sivikeleke emisebeni ye-UV. Lokhu kwenziwa ngokusonga ibhodlela ku-aluminium foil. Isixazululo esivikelwe ngale ndlela singagcinwa amahora angama-7.
Esikhathini esiningi, akwenzeki, kepha ezimweni ezingandile, ngemuva kokudonsa kwekhambi, ukwethuka, iphoyinti elincanyana ukuvuvukala kolwelwesi lwama-mucous kanye nesikhumba, ukuqubuka kwe-hemorrhagic, i-thrombocytosis kungenzeka.Ngokuphatha ngokushesha okukhulu, kungenzeka ukuthi kunengcindezi yangaphakathi nobunzima bokuphefumula.
Ukubuyekezwa okuvela kwiziguli nodokotela bathi zonke lezi zimpawu zihamba ngaphandle kokungenelela.
Kukhona ukusabela kwasendaweni okuvela endaweni yomjovo. Lokhu kungaba yi-urticaria noma esinye isibonakaliso se-allergic, kuze kufike ekushayweni kwe-anaphylactic. Ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia, okungenzeka kudalwe wukuthuthuka kokufakwa kweglue, akunqunyelwe.
Izibhebhe ze-Berlition zivame ukubekezelelwa ngaphandle kwemiphumela emibi. Kepha kwesinye isikhathi ukuphazamiseka okulandelayo kungenzeka:
I-in vitro Berlition ihlangana nezinsimbi ezihlanganisiwe zensimbi. Isibonelo, i-cisplatin ingabhekwa. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kanyekanye ne-cisplatin kunciphisa umphumela wokugcina.
Kepha umphumela wezidakamizwa ze-hypoglycemic zomlomo kanye ne-insulin, i-Berlition 300 noma i-600, okuphambene nalokho, uyathuthukisa. I-Ethanol, etholakala ophuzweni oludakayo, yehlisa umphumela wokwelapha umuthi (funda ukubuyekezwa).
Umuthi osebenzayo we-Berlition, lapho usabela ngoshukela, amafomu angavumelani kahle angenalutho. Kuyalandela ukuthi isixazululo se-thioctic acid asikwazi ukuhlanganiswa nokwenziwa kwe-dextrose, i-Ringer, nezinye izixazululo ezifanayo.
Uma i-Berlition 300, amaphilisi angama-600 athathwe ekuseni, ungasebenzisa imikhiqizo yobisi, i-magnesium nokulungiswa kwensimbi kuphela ngemuva kwasemini noma kusihlwa. Ngokuqondene nemikhiqizo yobisi, lokhu kungenxa yokuthi aqukethe inani elikhulu le-calcium.
Isikhathi sokukhulelwa nokuncelisa ibele. Yize umphumela ongemuhle wesidakamizwa awufakazelwe, ngoba akukho ukubuyekezwa kanye nezifundo zohlelo olunjalo.
Ukuzwela okuphezulu kuzakhi ze-Berlition.
Umuthi awubekelwe izingane (akukho ukubuyekezwa ngokuphepha nangokusebenza kahle).
Isitoreji, iholide, ukupakishwa
Umuthi ungowalolo hlu B. Kufanele lugcinwe emazingeni okushisa angeqi ku-25 ° C, endaweni emnyama engatholakali ezinganeni.
Isikhathi sokusebenzisa sincike ohlotsheni lokukhululwa:
Isixazululo somjovo - iminyaka emi-3,
amaphilisi - iminyaka emi-2.
I-Berlition ikhishwa kuphela ngomuthi ovela emtholampilo. Isixazululo somjovo siyatholakala kuma-ampoules amnyama angama-25 mg / ml. Amabhokisi ekhadibhodi (emathileyi) aqukethe ama-ampoules ayi-5. Nayi imiyalo yokusetshenziswa.
Izibhebhe ze-Berlition zenziwa futhi zahlanganiswa ngezingcezu eziyi-10 emabhulokisini enziwe ngezinto ze-opaque PVC noma i-aluminium foil. Ukufakwa kwekhadibhodi kuqukethe ama-3 amanxeba anjalo nemiyalo esetshenzisiwe.
Isithasiselo somuthi sokukhathazeka kwemithi yaseJalimane iBerlin Chemi asiyonto edlula i-thioctic (alpha-lipoic) acid - i-antioxidant ye-endo native ethola ama-radicals wamahhala futhi isetshenziswa kwezokwelapha njenge-hepatoprotector. Ngokomqondo wanamuhla, le nto ingeyamavithamini ("Vitamin N"), imisebenzi yezinto eziphilayo ezihambisana nokuzibandakanya kwayo kwinqubo ye-oxidative decarboxylation yama-alpha-keto acid. Ukuba khona kwamaqembu e-sulfhydryl, alungele "ukuhlanganisa" bonke labo abanobubi bokuzungeza ama-radicals mahhala ayingozi, kunika izakhiwo ze-antioxidant ku-molecule ye-thioctic acid. Lokhu kuvumelana nokubuyiselwa ngempumelelo kwamangqamuzana amaprotheni onakaliswe ukucindezela kwe-oxidative. Ngakho-ke, i-thioctic acid inomthelela omuhle kumetabolism yamaprotheni, ama-carbohydrate, cholesterol futhi isebenza njenge-detoxifier uma kwenzeka ubuthi unamaphilisi okulala nosawoti wezinsimbi ezisindayo. Imiphumela ebaluleke kakhulu yemvelo ye-thioctic acid ifaka phakathi: ukwenziwa kwe-transmembrane glucose ngokuqalwa kanyekanye kokusebenza kwezinqubo zayo ze-oxidation, ukucindezelwa kwezinqubo ze-protein oxidation, umphumela we-antioxidant, ukuncishiswa kwama-acid egazi, ukuvinjwa kwezinqubo zokuqhekeka kwamafutha, ukwehla kwenani eliphelele le-cholesterol egazini, igazi, ukumelana okwandayo kwamangqamuzana yindlala yomoya-mpilo, ukukhuphuka komphumela wokulwa nokuvuvukala kwama-corticosteroids, choleretic, spasm imiphumela yezepolitiki neyokuhlehlisa.
Ngenxa yalokhu, i-thioctic acid (i-berlition) isetshenziswa kabanzi kwizifo zesibindi, i-hypertension ye-arterial, isifo sokuqina kwemizwa kanye nesifo sikashukela. Lapho usebenzisa i-Berlition njenge-hepatoprotector, umthamo kanye nobude besifundo se-pharmacotherapeutic kubaluleke kakhulu. Izilingo zemitholampilo ezenziwa ngaphezulu kweminyaka engamashumi amane zikhombisile ukuthi umthamo we-30 mg awuzange usize ekwelashweni kwe-cirrhosis yesibindi kanye ne-viral hepatitis, kepha ukwanda kwayo okuphindwe kayishumi kanye nokuphathwa kungakapheli izinyanga eziyisithupha kuthuthukisa i-hepatic biochemistry. Uma uhlanganisa indlela yomlomo kanye ne-injectable ye-berlition (futhi umuthi uyatholakala ngendlela yamathebulethi bese ugxila ngokulungiswa kwekhambi lokufaka), khona-ke umphumela oyifunayo ungatholakala ngokushesha.
Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi i-Berlition ngenxa yomphumela wayo we-antioxidant kanye ne-lipotropic ingenye yezidakamizwa ezibalulekile zokwelashwa kwezilonda zesibindi, kubandakanya i-cirrhosis, i-hepatitis, i-cholecystitis engapheli. Umuthi futhi ungasetshenziswa ekuziphatheni kwenhliziyo ezigulini ezinenkinga yokuwohloka kwamathambo, isifo senhliziyo nesifo sokuqina kwegazi. Ukuphendula okuhlukile nge-Berlition kuyaqabukela kakhulu futhi akuyona inkinga enganqwabeni yokuqhubeka kokusebenzisa umuthi.
I-Thioctic (alpha-lipoic) acid iyi-antioxidant ye-endo native of Direct (ibopha ama-radicals mahhala) nemiphumela engaqondile. Kuyi-coenzyme ye-decarboxylation yama-alpha-keto acid. Kuyasiza ekwehliseni ukugcwala kwe-glucose egazini le-plasma futhi kwandise ukugcwala kwe-glycogen esibindini, futhi kunciphisa ukumelana ne-insulin, kubamba iqhaza ekuqondisweni kwe-carbohydrate kanye ne-lipid metabolism, kuvuselela ukushintshaniswa kwe-cholesterol. Ngenxa yezakhiwo zayo ze-antioxidant, i-thioctic acid ivikela amaseli emonakalisweni yimikhiqizo yayo yokubola, inciphisa ukwakheka kwemikhiqizo yokugcina ye-glycosylation eqhubekayo yamaprotheni kumaseli ezinzwa ku-mellitus yesifo sikashukela, ithuthukisa i-microcirculation kanye nokugeleza kwegazi kwe-endoneural, futhi kwandise okuqukethwe ngokomzimba kwe-glutathione antioxidant. Ukusiza ukunciphisa ukunqwabelana kwe-glucose egazini le-plasma yegazi, kuthinta i-glucose metabolism ehlukile ku-mellitus yesifo sikashukela, kunciphisa ukugcwala kwama-metabolic metabolites ngesimo sama-polyols, bese ngaleyo ndlela kunciphisa ukuvuvukala kwezicubu zomzimba. Ngenxa yokubamba iqhaza kokudla kwamafutha, i-thioctic acid ikhulisa i-biosynthesis yama-phospholipids, ikakhulukazi ama-phosphoinositides, athuthukisa ukwakheka okonakele kwama-membranes weseli, i-normalize energy metabolism kanye ne-nerve impulses. I-Thioctic acid iqeda imiphumela enobuthi yama-metabolites otshwala (i-acetaldehyde, i-pyruvic acid), inciphisa ukwakheka ngokweqile kwama-molecule wama-radicals oksijini okhululekileyo, inciphisa i-endoneural hypoxia ne-ischemia, yenze buthaka ukubonakaliswa kwe-polyneuropathy ngendlela ye-paresthesia, umuzwa ovuthayo, izinhlungu nokubekezela kwezinto eziphelele. Ngakho-ke, i-thioctic acid ine-antioxidant, umphumela we-neurotrophic, ithuthukisa i-lipid metabolism.
Ukusetshenziswa kwe-thioctic acid ngendlela kasawoti we-ethylenediamine kunganciphisa ubunzima bemiphumela emibi engenzeka.
Izimo zesitoreji se-Berlition yezidakamizwa
Kumazinga okushisa angeqi ku-30 ​​° C. Ukuze uvikele okuqukethwe esenzweni sokukhanya, ama-ampoules kufanele agcinwe ebhokisini lekhadibhodi. Isixazululo esilungiselelwe ukumiliselwa kufanelekile ukusetshenziswa amahora ayi-6, inqobo nje uma kuvikelwe ukukhanya.
Uhlu lwamakhemisi lapho ungathenga khona i-Berlition:
Kulesi sihloko sezokwelapha, ungathola i-Berlition yezidakamizwa. Imiyalo esetshenzisiwe izocacisa ukuthi yimaphi amacala lapho ungathatha khona imijovo noma amaphilisi, ukuthi umuthi usiza ini, iziphi izinkomba zokusebenzisa, ukuphikisana kanye nemiphumela emibi. Isichasiselo sibonisa uhlobo lomuthi nokwakheka kwawo.
Kulesi sihloko, odokotela nabathengi bangashiya kuphela ukubuyekezwa kwangempela nge-Berlition, lapho ungathola khona ukuthi umuthi wasiza ekwelapheni i-hepatitis, i-cirrhosis, i-polyneuropathy yotshwala kanye nesifo sikashukela kubantu abadala nasezinganeni, okusabelwe yona namanje. Uhlu lwemiyalo ye-Berlition, amanani entengo yesidakamizwa emakhemisi, kanye nokusetshenziswa kwayo ngesikhathi sokukhulelwa.
Umuthi olawula i-metabolism emzimbeni womuntu yi-Berlition. Imiyalo esetshenzisiwe ikhombisa ukuthi amaphilisi noma amaphilisi we-300 mg, imijovo kuma-ampoules osizo lomjovo ngezinkinga zesibindi.
Ukusetshenziswa kwe-Berlition kungadala imiphumela elandelayo elandelayo:
Ukuphendula kwe-allergic: ukulunywa, ukuqhuma kwesikhumba, i-urticaria, i-eczema.
Ukusuka emgodini wokugaya ukudla: ukuphazamiseka kwe-dyspeptic, isicanucanu, ukugabha, ushintsho ekunambithekeni, ukuphazamiseka kwesitulo.
Kusukela ohlangothini lwesistimu yezinzwa ephakathi: umuzwa wobunzima ekhanda, i-diplopia, ukwehluleka (ngemuva kokuphathwa ngokushesha kwe-intravenous).
Ku-CCC: i-tachycardia (ngemuva kokuphathwa ngokushesha kwegazi), i-hyperemia yobuso nomzimba ongaphezulu, izinhlungu nomuzwa wokuqina esifubeni.
Ezimweni ezingavamile, ukwethuka kwe-anaphylactic kungenzeka.
Izimpawu ze-hypoglycemia, ikhanda, ukujuluka ngokweqile, isiyezi, nokukhubazeka okubukwayo nazo kungenzeka. Ukuphefumula, i-purpura, ne-thrombocytopenia kwesinye isikhathi kuyabonakala. Ekuqaleni kokwelashwa ezigulini ezine-polyneuropathy, i-paresthesia enomuzwa wama-goosebumps ezinwabuzelayo angaqina.
Imidwebo ye-Berlition yezidakamizwa
Isakhiwo sinquma izikhalo:
I-Alpha Lipoic Acid
Eqenjini lama-hepatoprotectors afaka ama-analogues:
Imibandela yeholide nentengo
Izindleko ezijwayelekile zeBerlition (amaphilisi ayi-300 mg No. 30) eMoscow angama-ruble angama-800. Ampoules 600 mg 24 ama-PC. kubiza ama-ruble angama-916. Ikhishwe ngumbhalo.
Amathebhulethi agcinwa emakamelweni owomile endaweni yokushisa ka-15-25 C. Impilo yeshelfini - iminyaka emi-2. Amakhompiyutha agcinwa endaweni eyomile, emnyama endaweni yokushisa engeqi ku-30 ​​C. Impilo yeshelufu lama-capsule ase-Berlition yiminyaka engama-300 - 3, kanti amaphilisi ayiminyaka engama-600 kuya kwengama-2,5.
Umuthi ungummeleli weqembu lama-hepatoprotectors - izidakamizwa ezikhulisa ukumelana kwamaseli wesibindi emiphumeleni emibi futhi ithuthukise ukusebenza kwawo wonke. Izakhi ezisebenzayo zomuthi zibandakanyeka kumthethonqubo we-lipid ne-carbohydrate metabolism futhi zibonisa izakhiwo zokuphuma emzimbeni. Le miphumela ibangelwa ukusetshenziswa komuthi ezifweni zesibindi namanye ama-pathologies athinta lesi sitho.
I-Berlition yezidakamizwa nokusetshenziswa kwayo
Ngokuya ngomthamo wengxenye esebenzayo, umuthi ungaqokwa ngokuthi "Berlition 300" noma "Berlition 600". Ifomu lokuqala liqukethe ama-300 mg wezinto ezisebenzayo, kanti owesibili - u-600 mg. Ukuhlushwa kwayo kuhlala kunjalo futhi kungama-25 mg / ml. Ngalesi sizathu, lesi sidakamizwa ngendlela yesisombululo sokufakwa sitholakala kumanani we-12 ml no-24 ml. Amatafula kanye namaphilisi angaba nomthamo ohlukile nenani lezingcezu iqukethe eliqukethe. Okuvamile kuwo wonke amafomu kuyingxenye efanayo esebenzayo.
Ingxenye esebenzayo yalokhu kuqanjwa yi-alpha lipoic acid (thioctic, lipoic, Vitamin N), okuyinto efana nevithamini.Kubalulekile ku-oxidative decarboxylation yama-alpha-keto acid. Ifomu ngalinye lokukhululwa linezakhi zalo ezisizayo. Ukuqanjwa kuchazwe ngemininingwane ethebuleni:
Umthamo wesithako esisebenzayo - i-thioctic acid
Gxilisela okusetshenziselwa ama-droppers
300 mg noma 600 mg
I-Ethylene diamine, i-propylene glycol, amanzi okujova.
Isixazululo esicacile nge-tint eluhlaza okotshani, ama-ampoule ayi-5, ama-10 noma angama-20, athengiswa emathinini amakhadibhodi (300 mg), noma ama-ampoules ayi-5, afakwa emaphallet epulasitiki.
I-Titanium dioxide, amafutha aqinile, isixazululo se-sorbitol, i-gelatin, i-glycerin, i-triglycerides, i-amaranth, i-medium chain triglycerides.
I-Powder egobolondweni elithambile le-gelatin, lifakwe emithini.
I-Povidone, i-lactose monohydrate, i-colloidal silicon dioxide, i-MCC, i-croscarmellose sodium, i-magnesium stearate.
Ukuzungelezela ukwakheka, kuphuzi okuphuzi, okuhlanganiswe ngefilimu, i-biconvex, engcupheni ohlangothini olulodwa, olunendawo eyisisekelo, engalingani esigabeni sesiphambano.
Umuthi ngendlela yamathebulethi uthathwa ngomlomo uwonke. Kungcono ukwenza lokhu ekuseni ngaphambi kokudla kwasekuseni, ngoba ukudla kuthinta ukumuncwa kwengxenye esebenzayo. Usuku, udinga ukuthatha u-600 mg ngesikhathi, i.e. Izibhebhe ezi-2 ngasikhathi sinye. Isikhathi sesifundo sibekiwe kucatshangelwa isimo nezinkomba zesiguli. Amacwecwe asetshenziselwa ukwelapha i-atherossteosis, ubuthi kanye nesifo sesibindi. Umthamo unqunywa kucatshangelwa lesi sifo:
ekwelashweni kwe-polyneuropathy yesifo sikashukela - ama-600 mg ngosuku (i.e. amaphilisi amabili ngasikhathi),
ekwelashweni kwe-pathologies yesibindi - i-600-1200 mg (amaphilisi angu-2-4) nsuku zonke.
Isixazululo silungiselelwe kusuka kumuthi ku-ampoules ngenhloso yokuphathwa kwe-intravenous ngokumiliselwa (ama-droppers). Ukugxila kokuqukethwe kwe-thioctic acid ka-300 mg no-600 mg kusetshenziswa ngokwemiyalo efanayo. Inzuzo ye-infusions ngaphezulu kwamaphilisi isenzo esisheshayo. Le ndlela yokusebenzisa umuthi ikhonjiswa ngezimpawu ezinzima zomtholampilo.
Ukulungiselela umkhiqizo, i-1 ampoule eyi-12 ml noma i-24 ml ihlanjululwe ngo-250 ml we-saline yezomzimba. Uhlelo lokusetshenziswa kwayo ekwelapheni i-neuropathies:
Isikhathi esisodwa nsuku zonke emavikini angama-2-4, ama-dropper abekwa aqukethe ama-300 mg noma ama-600 mg we-thioctic acid,
base beguqukela kumthamo wokulungisa ngokuthatha amaphilisi angama-300 mg nsuku zonke.
Kuyadingeka ukulungiselela i-Berlition ye-infusions ngokushesha ngaphambi kwenqubo. Isizathu ukuthi ilahlekelwa ngokushesha izakhiwo zayo. Ngemuva kokulungiselela, isixazululo kumele sivikeleke elangeni ngenxa yobuningi bayo bezithombe. Ukuze wenze lokhu, isitsha esinaso sigoqiwe ngephepha eliminyene le-opaque noma i-foil. Ukugxiliswa okuxutshwe kugcinwa amahora angaphezu kwayisithupha, inqobo nje uma kusendaweni engenakutholwa yilanga.
Imiyalo yokusebenzisa amakhompiyutha iyafana neyamathebulethi. Bathathwa ngomlomo ngaphandle kokuhlafuna noma ukugqekeza. Umthamo wansuku zonke ngu-600 mg, i.e. 1 inhloko Kuyadingeka ukuyisebenzisa ngenani elanele lamanzi. Kungcono ukukwenza lokhu ekuseni isigamu sehora ngaphambi kokudla. Uma umthamo wengxenye esebenzayo yamaphilisi ungama-300 mg, ngaleso sikhathi udinga ukuthatha izicucu ezi-2 ngasikhathi sinye.
Isihloko: UMBHALO 600
Ikhodi ye-ATX: I-A16AX01 -
Ngokwengeziwe: i-propylene glycol, i-ethylene diamine, amanzi wokujova.
Eyodwa isicephu kungafaka i-300 mg noma i-600 mg i-thioctic acid. Ngokwengeziwe: amanoni aqinile, i-medium chain triglycerides, i-gelatin, isixazululo se-sorbitol, i-glycerin, i-amaranth, i-titanium dioxide.
Eyodwa ithebhulethi kufaka 300 mg i-thioctic acid. Ngokwengeziwe: i-magnesium stearate, i-lactose monohydrate, i-croscarmellose sodium, i-MCC, i-colloidal silicon dioxide, i-povidone, i-opadry ephuzi ophuzi OY-S-22898 (njengegobolondo).
Kuzo zonke izinhlobo zemithamo
ukwephula / ukuguqula ukunambitheka,
ukwehla kwe-plasma okuqukethweushukela (ngenxa yokuphuculwa kokufakwa kwayo),
izimpawu hypoglycemiakufaka phakathi umsebenzi wokubuka ongaboni kahle,.
ukubonakaliswakufaka nesikhumba ukuqhuma/, i-urticaria rash (), (ezimweni ezikhethekile).
Ukwengeza izinhlobo zobuzali bezidakamizwa
ukuvutha endaweni yomjovo,
ukuphefumula futhi anda (kuphawulwe ezimweni zokulawulwa okusheshayo kwe-iv futhi kudlule ngokuzenzakalelayo).
I-Berlition, imiyalo esetshenzisiwe (Indlela nomthamo)
Imiyalo esemthethweni yokusetshenziswa kwe-Berlition 300 ifana nemiyalo yokusetshenziswa kwe-Berlition 600 kuzo zonke izinhlobo zemithamo yalesi sidakamizwa (isixazululo somjovo, amakhompiyutha, amaphilisi).
Umuthi i-Berlition okuhloswe ngawo ukulungiswa kwe-infusions ekuqaleni uchazwa kumthamo wansuku zonke we-300-600 mg, ophekwa ngaphakathi nsuku zonke endaweni yokudonsa okungenani imizuzu engama-30, amaviki angama-2-4. Masinyane ngaphambi kokumiliselwa, isixazululo somuthi silungiswa ngokuxuba okuqukethwe i-1 ampoule engama-300 mg (12 ml) noma ama-600 mg (24 ml) angama-250 ml umjovo (0,9%).
Ngokuphathelene ne-photosensitivity yesisombululo sokumiliselwa esilungiselelwe, kufanele ivikelwe ekuvezweni ukukhanya, ngokwesibonelo, okugoqwe nge-foil ye-aluminium. Kuleli fomu, ikhambi lingagcina izakhiwo zalo cishe amahora ayi-6.
Ngemuva kwamaviki ama-2-4 wokwelashwa nokusebenzisa i-infusions, ashintshela ekwelashweni ngokusebenzisa izinhlobo zomthamo womuthi. Amaphilisi we-Berlition noma amaphilisi anqunywa kumthamo wokulondolozwa nsuku zonke we-300-600 mg futhi kuthathwe esiswini esingenalutho cishe isigamu sehora ngaphambi kokudla, ukuphuza u-100-200 ml wamanzi.
Isikhathi sokufakwa kwe-infusion kanye ne-oral zokwelapha, kanye nokuthi kungenzeka kokuziphatha kwabo okuphindaphindiwe, kunqunywa udokotela ohamba yedwa.
Imiyalo yokusebenzisa i-Berlition: indlela nomthamo
Umuthi uvame ukuthathwa kanye ngosuku, ekuseni, isigamu sehora ngaphambi kokudla kwasekuseni. Izibhebhe ze-Berlition azikwazi ukuhlafunwa futhi zichotshozwe. Umthamo wansuku zonke wabantu abadala yi-600 mg (amaphilisi ama-2).
Umuthi osesimweni sokugxiliswa, ovinjelwe nesisombululo se-0.9% sodium chloride, uphathwa ngo-250 ml ngesigamu sehora. Umthamo wansuku zonke weziguli zabantu abadala ngu-300-600 mg. Ukwethulwa kwe-Berlition ngokungenantambo kuvame ukuba ngamasonto angama-2-4, emva kwalokho isiguli sidluliselwe umuthi ngomlomo.
Abesifazane abakhulelwe futhi abancelile abaphathwa ngalesi sidakamizwa. Isizathu ukuntuleka kwesipiliyoni somtholampilo nokusetshenziswa komuthi esigabeni esihambelanayo seziguli. Ukukhulelwa nokukhishwa komzimba kungukuphikisana okuphelele kokusetshenziswa. Uma kunesidingo sokusebenzisa i-Berlition ngesikhathi sokuncelisa, kufanele kuphazanyiswe isikhathi sonke sokwelashwa.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa kubantu abangafinyeleli eminyakeni engu-18 kuyicala eliphelele. Isizathu siyefana nasendabeni yabesifazane abakhulelwe nabakhanyayo. Kusendaweni yokuntuleka kwemininingwane yokuphepha ukusetshenziswa komuthi ebuntwaneni. Uma kunesidingo, ukusetshenziswa komuthi onjalo kufakwa omunye umuthi ophephile ezinganeni.
Ngesikhathi sokwelashwa nge-Berlition, kuyadingeka ukushiya ukusetshenziswa kotshwala, akuhambisani. I-Alcohol utshwala inciphisa ukusebenza komuthi. Uma uthatha isilinganiso esikhulu somuthi notshwala ngasikhathi sinye, umphumela ungaba ubuthi obukhulu bomzimba. Lesi simo siyingozi ngoba ingozi yokufa yanda kakhulu.
Ukwethulwa kwalesi sidakamizwa ngokusikwa kudlula uhlelo lokugaya ukudla, ngakho-ke le ndlela ibizwa ngokuthi yi-parenteral. Imiphumela emibi engaba khona ngale ndlela ayithinti ipheshana lesisu. Ukudonsa phansi nge-Berlition kwezinye iziguli kubangela:
ukunyuka kwengcindezi ye-intracranial,
umuzwa ovuthayo endaweni yomjovo,
Uhlobo ngalunye lokukhululwa kwalo muthi luhanjiswa ekhemisi kuphela uma kunikezwa udokotela evela kudokotela. Ama-Ampoules kufanele agcinwe emaphaketheni, awafake endaweni evikelwe elangeni. Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lingama-25 degrees. Okufanayo kuhamba ngamaphilisi kanye namathebulethi. Impilo yeshalofu yesidakamizwa yiminyaka emi-3.
I-Berlition yomuthi inezimpawu eziningi. Bahlukaniswe ngamaqembu amabili amakhulu. Esokuqala sifaka izichasizinda eziqukethe i-alpha lipoic acid. Iqembu lesibili lifaka izidakamizwa ezinomphumela ofanayo wokulapha, kodwa nezinye izinto ezisebenzayo. Ngokuvamile, izinkomba ezilandelayo ze-Berlition kumathebulethi nezixazululo zihlukaniswa:
I-Thiolipone. Ibuye ivezwe ngamathebulethi futhi igxile. Umuthi yi-antioxidant endo asuselwa ku-alpha lipoic acid. Inkomba yokusebenzisa kwayo i-polyneuropathy yesifo sikashukela.
I-Solcoseryl. Kutholakala ngesimo samafutha, ijeli yeso, ijeli, umjovo. Zonke zisekelwa ukukhishwa kwegazi elingenawo amaprotheni amathole ebisi anempilo. Uhlu lwezinkomba lubanzi kakhulu ukwedlula iBerlition.
I-Oktolipen. Isisekelo sihlanganisa i-thioctic acid. Inendlela efanayo yokukhishwa: gxila namathebulethi. Phakathi kwezinkomba zokusetshenziswa kwe-Oktolipen, ukudakwa, ubuthi obuphakathi kwamafutha, i-hyperlipidemia, i-hepatitis engamahlalakhona, ukonakala kwamafutha kanye ne-cirrhosis yesibindi, i-hepatitis A ihlukile.
I-Dalargin. Isithako esisebenzayo siyinto yegama elifanayo. Umuthi uyatholakala ngendlela yesisombululo sokuphathwa kwe-intravenous kanye ne-lyophilized powder. Kusetshenziswa njengengxenye yokwelashwa kotshwala.
IHeptral. Inomphumela wokuvuselela kumaseli wesibindi. Inesenzo esihlukile nokwakheka, kepha ithatha indawo kalula imikhiqizo esekwe kwi-thioctic acid.
Ungasithenga lesi sidakamizwa ekhemisi elijwayelekile noma eliku-inthanethi. Lapho uthenga, udinga ukunaka usuku lokukhiqizwa nelokuphelelwa yisikhathi. Intengo yomuthi incike hhayi emaphepheni ekhemisi ethile kuphela, kepha futhi kumthamo wengxenye esebenzayo kanye nenani lama-ampoules noma amaphilisi amaphakethe. Izibonelo zezindleko zikhonjisiwe etafuleni: